သြဂုတ်, 1910 ။
အဆိုပါလျှို့ဝှက် Societies မှပိုင်ဆိုင်သည်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်စိတ်ထဲ retarding သို့မဟုတ်တိုးတက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား
လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်စိတ်၏သဘောသဘာဝနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထိုအသင်း ၀ င်ဖြစ်သောလျှို့ဝှက်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်အညီစိတ်ကိုသူ၏တားဆီးကာကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်ကူညီလိမ့်မည်။ လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုခေါင်းနှစ်ခုအောက်တွင်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်တတိယအတန်းအစားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာကြပြီး၊ စိတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသင်ကြားပေးသော၊ ဝိညာဉ်ရေးရာသတ္တဝါများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတောင်းဆိုသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စက်ဝိုင်းများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များကိုထုတ်လုပ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ဟာဘယ်သူ့ကိုမှမထိုက်မတန်၊ အခြားသူများထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုဒုတိယတန်းသို့ရောက်သင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့၏အရာဝတ္ထုသည်ကာယနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။
ပထမလူတန်းစား၏လျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်ဒုတိယလူတန်းစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်အနည်းငယ်သောရာခိုင်နှုန်းသည်သာဝိညာဉ်ရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ကိုအမှန်တကယ်ကူညီသည်။ ဤပထမအတန်းအောက်တွင်နိုင်ငံရေးလေ့ကျင့်မှု၊ စစ်ရေးညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များဖြင့်သင်ကြားပို့ချခြင်းစသည့်အရာဝတ္ထုများမပါ ၀ င်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာနိုးထလာစေရန်နှင့်ကူညီရန်ကြိုးစားသောဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒicalနနှင့်ဘာသာရေးအခြေခံအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိအရာဝတ္ထုများသည်စိတ်ကိုအမှောင်ထုထဲတွင်သိုမှီးထားခြင်းကိုခွင့်မပြုလျှင်၎င်းသည်အသိပညာဆည်းပူးရန်တားဆီးခြင်းမခံရပါကထိုယုံကြည်ခြင်းအတွင်းရှိလျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုမှသူ၏ယုံကြည်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဝင်မှီသူသည်သူတို့၏အရာဝတ္ထုများနှင့်နည်းလမ်းများကိုကောင်းစွာလေ့လာသင့်သည်။ ကြီးမားသောဘာသာတရားတစ်ခုစီတွင်လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည်။ ဤလျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့သည်သူတို့၏အသင်း ၀ င်များကိုဘ ၀ အသိပညာနှင့်စပ်လျဉ်း။ မသိနားမလည်ဘဲသူတို့ဘာသာ ၀ င်များအားအခြားဘာသာတရားများမှမစော်ကားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်မသိဘဲမသိမှုတို့သည်အလွန်ကျူးလွန်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအမှားများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နာကျင်မှုနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုများစွာတို့အတွက်စိတ်ကိုယိမ်းယိုင်စေသည်။ ဘာသာတရားတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အယူအဆရှိသူများသည်ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အရာဝတ္ထုများနှင့်နည်းလမ်းများသည်ထိုစိတ်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်တွေ့ဆုံလျှင်၎င်းဘာသာတရား၏လျှို့ဝှက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှအကျိုးခံစားရနိုင်သည်။ ကြောင်းအထူးသဖြင့်ဘာသာတရားအတွက်ပညာပေးလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ၏ဘာသာတရားများသည်ဝိညာဉ်ရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်အချို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောမတူညီသောကျောင်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လူတစ် ဦး သည်ဘာသာတရားသည်သူ၏စိတ်၏ဝိညာဉ်ရေးတောင့်တင်းမှုကိုကျေနပ်သည်ဟုခံစားရသောအခါ၎င်းသည်ထိုဘာသာတရားကိုကိုယ်စားပြုသောဝိညာဉ်ရေးရာအတန်းအစားတွင်ပါဝင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအစာအာဟာရဟုခေါ်သောဘာသာတရားသည်ဘာသာတရားကိုဆက်လက်မဖြည့်ဆည်းပေးလျှင်၊ သို့မဟုတ်သူတစ် ဦး သည်သူ၏ဘာသာတရား၏“ အမှန်တရားများ” ကိုစပြီးမေးခွန်းထုတ်လာသောအခါ၎င်းသည်သူမပိုင်တော့ကြောင်းသို့မဟုတ်သူနှင့်ကွဲကွာနေကြောင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ။ အကယ်၍ သူကသံသယဝင်လျှင်၊ အကယ်၍ သူသည်ဘာသာတရား၏သွန်သင်ချက်များကို မကျေနပ်၍ ငြင်းပယ်လျှင်စကားမပြောနိုင်သော၊ မသိဘဲမကျေနပ်မှုများမှ လွဲ၍ အခြားအကြောင်းပြချက်များမရှိဘဲမိမိ၏ဘာသာတရား၏သင်ကြားမှုများကို မကျေနပ်၍ ရှုတ်ချပါက၎င်းသည်သူ၏စိတ် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအလင်းနှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်သူ့စိတ်ကိုပိတ်ထားကြောင်းနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာဘဝ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အကယ်၍ စိတ်သည်သူ၏အထူးကိုးကွယ်ရာဘာသာ (သို့) မွေးဖွားသောဘာသာတရားသည်ကျဉ်းမြောင်း။ ကျဉ်းကျပ်သည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်သူ၏စိတ်ကိုသိလိုသောဘဝ၏မေးခွန်းများကိုကျေနပ်ခြင်းမရှိ၊ အဖြေမပေးပါက၎င်းသည်သူ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည်။ စိတ်သည်ထိုဘာသာတရားကိုကိုယ်စားပြုသောထိုအတန်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူ၏စိတ်သည်ဆက်လက်ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအစာကိုထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြသသည်။
ဒုတိယလူတန်းစား၏လျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤလူတန်းစားအောက်တွင်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရကိုဖြုတ်ချရန်လျှို့ဝှက်စွာဖွဲ့စည်းထားသောသူများ၊ သို့မဟုတ်အုံကြွမှု၊ လူသတ်မှုသို့မဟုတ်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနှင့်ရက်စက်သောအလိုဆန္ဒများအတွက်အတူတကွစုရုံးနေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အရာဝတ္ထုများကိုသိလျှင်၎င်းမှတစ်ခုခုသည်သူ၏စိတ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုမည်၊ မဆန့်မည်ဖြစ်စေအလွယ်တကူပြောနိုင်သည်။
လျှို့ဝှက်ချက်၏စိတ်ကူးသည်အခြားသူများတွင်မရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုသိရှိခြင်းသို့မဟုတ်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်အသိပညာအနည်းငယ်ကိုဝေမျှခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဗဟုသုတများ၏ဆန္ဒသည်အားကောင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသောလူငယ်များနှင့်ကြီးထွားလာသောစိတ်ကိုဆွဲဆောင်သည်။ လူများသည်သီးသန့်ဖြစ်သော ၀ င်ရောက်ရန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုခုတွင် ၀ င်ရောက်လိုသောဆန္ဒနှင့်၎င်းအားမ ၀ င်သူများ၏လေးစားမှု၊ ကလေးများပင်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနှစ်သက်ကြသည်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သူမလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိကြောင်းပြသရန်သူမ၏ဆံပင်သို့မဟုတ်ခါးတွင်ဖဲကြိုးကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ သူမသည်မနာလိုမှုနှင့်အခြားမိန်းကလေးငယ်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမသိခင်အထိဖဲကြိုးနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အခြားဖဲကြိုးနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်အသစ်တစ်ခုရှိသောအခြားမိန်းကလေးငယ်သည်ဆွဲဆောင်မှု၏ဗဟိုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ဆိုးဝါးသောသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းများ မှလွဲ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များသည်တန်ဖိုးနည်းသို့မဟုတ်မိန်းကလေး၏လျှို့ဝှက်ချက်များလောက်အရေးမကြီးပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ပိုင်တဲ့သူတွေကတော့မိန်းကလေးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကသူတို့ကိုအကျိုးရှိစေတဲ့“ play” ပါ ၀ င်နိုင်တယ်။ စိတ်သည်ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှလျှို့ဝှက်ချက်ကိုအလိုမရှိတော့ပါ၊ လျှို့ဝှက်လိုသောသူများသည်မရင့်ကျက်သေးကြောင်း၊ သူတို့၏အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များသည်အလင်းကိုရှောင်ရှားရန်အမှောင်ထုကိုရှာဖွေနေသည်။ ရင့်ကျက်သောစိတ်သည်ဗဟုသုတထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုဖြန့်ဖြူးလိုသည်၊ သို့သော်သူသည်ဗဟုသုတများအားလုံးကိုမတူနိုင်ကြောင်းသူသိသည်။ ပြိုင်ပွဲသည်ဗဟုသုတတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများ ၀ ယ်လိုအားကျဆင်းသင့်သည်။ ကျောင်းမိန်းကလေးအရွယ်ထက်ကျော်လွန်သောစိတ်တိုးပွားစေရန်လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများမလိုအပ်ပါ။ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးနှင့်စာပေရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သာမန်ဘဝသည်စိတ်ကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးရှိပြီးစိတ်ကိုနုပျိုသောအဆင့်များမှတစ်ဆင့်တိုးတက်စေလိမ့်မည်။ မည်သည့်လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်စိတ်ကို၎င်း၏သဘာဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထက် ကျော်လွန်၍ တိုးတက်စေနိုင်မည်နည်း၊ သဘာ ၀ ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖြတ်၍ မြင်နိုင်ရန်နှင့်ဘဝပြtheနာများကိုဖြေရှင်းရန်လည်းစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ စိတ်သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မရပ်တန့်ဘဲသူတို့၏သွန်သင်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုထိုးဖောက်နိုင်လျှင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းအနည်းငယ်သည်စိတ်ကိုအကျိုးပြုနိုင်သည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် Mason Order ဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်ဤအဖွဲ့အစည်း၏စိတ်ထဲတွင်အနည်းငယ်သာစီးပွားရေးသို့မဟုတ်လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်များကိုရရှိသည်။ သင်္ကေတ၏တန်ဖိုးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာသင်ကြားခြင်းတို့သည်လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ထဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်အမှန်တကယ်လျှို့ဝှက်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုလျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဟုမခေါ်ဆိုပါ။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာကိုမသိပါ။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ဝင်ရိုးရာဓလေ့အားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကြီးထွားမှုအားဖြင့်၊ ဒါဟာထဲသို့စိုက်ပျိုးရမည်ဖြစ်သည်, မဝင်ရ။ အကယ်၍ မိမိကိုယ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်။ စိတ်ကြီးထွားနေလျှင်မည်သူမျှထိုအဖွဲ့အစည်းမှစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။ စိတ်သည်ဘဝ၏ဗဟုသုတတိုးပွားလာသည့်အခါစိတ်သည်မိုးတိမ်များကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဘဝပြproblemsနာအားလုံးအပေါ်အလင်းဖြာခြင်းနှင့်သူတို့၏သဘာဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြားစိတ်များကိုကူညီခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းသည်။ လျှို့ဝှက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်မိမိအလိုအလျောက်ကြီးပြင်းလာလိုသောစိတ်ကိုမကူညီနိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်အချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလော အဘယ်ကြောင့်လူတွေအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရရန်ကြိုးစားသလဲ? ဘယ်လိုအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ပေါ်လာသူတွေကိုသူတို့ get အရာကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်သလဲ?
လူတိုင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှအချည်းနှီးဘာမျှမတတ်နိုင်ဟုယူဆသည်၊ မှားယွင်းကြောင်း၊ သူကအချို့အရာဝတ္ထုနှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်စဉ်းစားသည့်အခါသေး သူ၏ အလိုဆန္ဒ, ကောင်းသောတရားသဖြင့်စီရင်လျစ်လျူရှုသည်နှင့်သူဆန္ဒရှိနားရွက်နှင့်အတူအကြံပြုချက်ကိုနားထောငျနှင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ယုံကြည်ကြောင်းသို့မိမိကိုမိမိလှည့်ဖြား he ဘာမျှမတစ်ခုခုရလိမ့်မည်။ ဘဝသည်လိုအပ်သောအရာအားလုံးအတွက်တရားမျှတသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အကောင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည်ဘဝလည်ပတ်ခြင်း၊ ပုံစံများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ပြောင်းခြင်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသောလိုအပ်သည့်ဥပဒေအပေါ်အခြေခံသည်။ မည်သည့်အရာကမျှသူ့ထံသို့မလာနိုင်သောအရာတစ်ခုကိုရှာရန်ကြိုးစားသူသည်သဘာဝဥပဒေနှင့်အညီဘဝဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပုံစံများဖြန့်ဝေခြင်းကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသဘာဝကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ သူသည်ပြစ်ဒဏ်ကိုပေးသည်၊ ထိုသဘောသဘာဝအပြင်ဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအားလုံးကအတိအကျတောင်းယူပြီးသူယူထားသောသို့မဟုတ်အခြားသူကိုလုံးဝဖိနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းများကိုပြန်ပေးရန်လုပ်သည်။ အကယ်၍ သူသည်သူရရှိသောအရာသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်သာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအငြင်းပွားခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသူကန့်ကွက်ပါကသူသည်ဘာမျှမတတ်နိုင်လျှင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲသူ့ထံသို့လာလိမ့်မည်၊ သူကရရန်လုပ်ခဲ့တယ်သောအားထုတ်မှု။ မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှု၊ အခွင့်အလမ်းများသို့မဟုတ်အမွေဆက်ခံခြင်းများကဲ့သို့သောသိသာထင်ရှားသည့်အားထုတ်မှုမရှိဘဲအရာရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိသောအခါ၎င်းတို့သည်ဥပဒေမှသဘာဝထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အညီလာကြသည်၊ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်တရား ၀ င်မှုနှင့်ဥပဒေအရဖြစ်သည်။ အခြားသောအမှုများတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုသာလိုချင်ခြင်း၊ စဉ်းစားခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ များစွာသောဥပဒေသို့မဟုတ်ကြွယ်ဝသောစည်းမျဉ်းဥပဒေများအရတောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်းအဘယ်အရာကိုမျှရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တ ဦး တည်းအချည်းနှီးသောအရာတစ်ခုခုကိုရပုံပေါ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကတစ်ခုခုကိုအချည်းနှီးရှာဖို့ကြိုးပမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုကဒီဟာကမှန်တယ်လို့မယူဆနိုင်ပေမယ့်တခြားသူတွေကသူတို့လုပ်ခဲ့ပုံမပေါက်တဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတွေကရရှိခဲ့တာကိုသူတို့တွေ့မြင်လို့ပါ။ လူတွေဟာသူတို့လိုချင်တာတွေကိုရချင်လို့ရတာတွေ၊ တောင်းဆိုတာတွေလုပ်ပြီးရသမျှအထိရကြတယ်။ အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာလူတစ် ဦး ၏စိတ်သည်လုံလောက်စွာရင့်ကျက်မှုမရှိသောကြောင့်သူသည်ဆွဲဆောင်နိုင်မှု၊ သွေးဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဟန်ဆောင်မှုများကြားမှ၎င်းသည်ဘာမျှမတတ်နိုင်ကြောင်းသိရန်လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကသူသည်ဘာမျှမတတ်နိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုရနိုင်သည်ဟုယူမှတ်သူသည်အမှန်တကယ်မရိုးသားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သာမန်စီးပွားရေးဘဝတွင်အကြီးမားဆုံးသောလူကုန်ကူးမှုသည်ဥပဒေကိုကျော်လွန်နိုင်ပြီးဘာမှမရနိုင်တော့ဟုယုံကြည်သောသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလူများသည်မိမိတို့၏လိုအင်ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းထက်ပြည်သူလူထုကို ပို၍ လိမ္မာပါးနပ်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမြန်စီမံချက် (သို့) အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုခုကိုပေးပြီးတခြားသူတွေကိုမရိုးသားသူအဖြစ်သွေးဆောင်သော်လည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသည်။ ဒီအစီအစဉ်ထဲကို ၀ င်သူအများစုဟာသူရဲ့အခြားလူတွေထဲကအကောင်းဆုံးကိုဘယ်လိုရမယ်ဆိုတာကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲသူကမကြာခဏပြလေ့ရှိပြီးသူတို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလည်းဘယ်လိုအမြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ရိုးသားပါက၎င်းတို့ကိုအစီအစဉ်သို့မထည့်သွင်းပါ။ သို့သော်သူ၏လိမ်လည်လှည့်စားမှုများနှင့်လောဘကြီးခြင်းကိုဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ သူ၏မရိုးသားသောနည်းလမ်းများအားဖြင့်သူသည်သားကောင်များပေးသောအရာကိုရရှိသည်။
တစ်ခုခုရသူတွေကသူတို့ရသမျှကိုပေးရမယ်။ အကယ်၍ များစွာသောသူတို့သည်လေထုထဲမှထွက်လာပြီးအရာ ၀ တ္ထုများနိယာမတရားသို့မဟုတ်စကြ ၀ storeာသိုလှောင်ခန်းသိုမဟုတ်ခမ်းနားထည်ဝါစွာနိူင်သောနိူင်ငံမှခေါ်ယူခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ချေးငွေများကို ၀ ယ်ယူခြင်း၊ အခြေချခြင်း၏အချိန်ကိုမစဉ်းစားသောမျက်မြင်များ။ ချေးငွေဖြင့် ၀ ယ်ယူသောအရင်းအမြစ်များမရှိသောသူများကဲ့သို့ဤစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ထားများသည်သူတို့မလိုအပ်သောအရာများကိုမကြာခဏရတတ်ကြသည်။ ဤစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိသည့်ဝယ်ယူသူများကဲ့သို့“ များပြားသောဥပဒေ” ကိုတောင်းဆိုသူများသည်သူတို့ရရှိသောအရာများကိုများစွာလုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်အခြေချချိန်ရောက်လာသောအခါသူတို့သည်ဒေဝါလီခံရန်နီးကပ်လာသည်။ ကြွေးမြီကိုအသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဥပဒေက၎င်း၏ငွေပေးချေမှုကိုအတိအကျသတ်မှတ်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုကို၎င်းတို့အား“ များပြားသောနိယာမတရား” မှဖြစ်စေ၊ “ အကြွင်းမဲ့အာဏာ” မှဖြစ်စေ၊ အခြားအရာများမှတောင်းခံကာတောင်းဆိုချက်အရဖြစ်စေ၊ သူသည်တရားဝင်ဘ ၀ ၌တရားဝင်ရမည့်အစား၊ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်သည့်နေရာတွင်သူရရှိထားသည့်အရာနှင့်အသုံးပြုရန်တောင်းဆိုသည့်အတိုးကိုပြန်ပေးရမည်။
တစ်ခုမှာ ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကို ပြင်ဆင်၍ စိတ်နေသဘောထားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားပြန်လည်ကျန်းမာစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုစိတ်ပူပန်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ကျဉ်းပေးလေ့ရှိသည်။ စိတ်ကိုမှန်ကန်သောစိတ်ထားဖြင့်ယူဆောင်လာသောအခါအာရုံကြောပြtroubleနာကိုတည့်မတ်ပေးပြီးခန်ဓာသည်၎င်း၏သဘာဝလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ၎င်းသည်တရားဝင်ပျောက်ကင်းစေခြင်း (သို့) နာမကျန်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ရောဂါကို၎င်း၏အရင်းအမြစ်မှပြatနာကိုကုသပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရောဂါအားလုံးနှင့်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုသည်စိတ်သောကရောက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ မကျန်းမာသောကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါများကိုများသောအားဖြင့်မလျော်ကန်သောအစားအစာများစားခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့သည်လူတစ် ဦး ၏အလုပ်အတွက်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအရသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
မတော်လျော်သောအစာကျွေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောရောဂါများကိုပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သည်။ စိတ်ရောဂါသည်ဖြစ်စေတီထွင်ဖန်တီးလိုသောမည်သည့်စကားလုံးမှမဆိုထိုအရာများကိုတောင်းဆိုခြင်းနှင့်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးနှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုရရှိနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာစိတ်တွင်အခြားစိတ်များ၌ပြုမူလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသည့်အခြေအနေများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်စိတ်၌စွမ်းအားရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်၏အခြေအနေအပေါ်ပြုမူလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အလှည့်သည်စိတ်လိုအပ်သောအခြေအနေများအပေါ်ပြုမူခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ စိတ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သြဇာသက်ရောက်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုကိုအချိန်အတန်ကြာပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များကိုရရှိရန်စိတ်သည်သဘာဝဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သောအခြေအနေတိုင်းတွင်ဥပဒေသည်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုတောင်းဆိုသည်။ တုံ့ပြန်မှုသည်မူလပြtroubleနာများထက် ပို၍ ပြင်းထန်လေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုတောင်းဆိုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာအကျိတ်ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကြီးထွားမှုပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကိုစိတ်ကနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့သောကုသမှုကိုပေးဆပ်ရန်အတွက်သဘာဝမှသူမ၏လိုအပ်ချက်ကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဥပဒေများ။ တရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်သူများနှင့်မိုက်မဲသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများကသူတို့၏နေရာကိုစွန့်ခွာရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရခြင်းကဲ့သို့သောအကျိတ်၏ပျံ့နှံ့မှုကိုအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းအားဖြင့်အကျိတ်၏ပြbeနာသည်အခြားနေရာများတွင်နေထိုင်ရန်ရှာကြံခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နေရာချထားနှင့်ဆက်ဆံဖို့ပိုခက်ခဲ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတင်းအကျပ်အားဖြင့်လူစုခွဲသောအခါအကျိတ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှအကျိတ်တစ်ခုအဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးအခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ရွံရှာဖွယ်အနာသို့မဟုတ်ကင်ဆာအဖြစ်ပြန်ပေါ်လာနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့အား“ အကြွင်းမဲ့အာဏာ” သို့မဟုတ်“ အကြွင်းမဲ့အာဏာသိုလှောင်ရုံ” မှတောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ရုပ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများပေးသည့်အခါလောင်းကစားသမားတစ် ဦး သည်သူ၏မရည်းစားရထားသောအကျိုးအမြတ်များကိုခံစားသောအခါသူသည်သူတို့ကိုအချိန်အတန်ကြာပျော်မွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်ဥပဒေကသူသည်ရိုးရိုးသားသားမရသည့်အရာများကိုပြန်ပေးရန်သာမကသူပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အရာများအတွက်ပေးဆောင်ရန်လည်းတောင်းဆိုထားသည်။ ဤငွေပေးချေမှုသည်တောင်းဆိုသူသည်အလိုရှိသောအရာတစ်ခုအတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပြီးသောအခါ၎င်းသည်သူ့လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအချိန်တွင်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ သိုမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ရရှိပြီးနောက်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောနည်းဖြင့်ရှုံးသောအခါငွေပေးချေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သူကသူတို့အသေချာဆုံးကိုခံစားရသည့်အခါသူထံမှသူတို့ကိုယူသွားစေခြင်းငှါ။ သဘာဝတရားသည်ဒင်္ဂါးပြားတွင်ငွေပေးချေရန်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်ထားသောအကြွေးနှင့်ညီမျှရန်လိုအပ်သည်။
စိတ်တစ်ခုသည်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားတရား ၀ င်မဟုတ်သောနည်းဖြင့်ကျွန်တစ် ဦး အဖြစ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်မှသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်တန်ဆာအဖြစ်သို့ရောက်သောအခါစိတ်ကမ္ဘာ၏ဥပဒေများကထိုစိတ်ကိုအာဏာမှဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကစွမ်းအားကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေထဲကတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုအတော်များများကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ စိတ်ဖြင့်အာဏာအားချို့တဲ့ခြင်း၊ သူတပါး၏လိုအင်ဆန္ဒများကိုရယူခြင်းအတွက်အခြားသူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်ပြ,နာများနှင့်စိတ်ထဲမှောင်မိုက်နေသည့်စိတ်အတွင်း၌ရုန်းကန်နေရသောအခါ၊ ၎င်း၏အမှားများကိုတည့်မတ်ပေးရန်နှင့်သူ့ဟာသူစိတ်ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုလေယာဉ်အဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများ။ အချည်းနှီးသောအရာတစ်ခုရလာသည့်လူအများစုတို့သည်အခြားဘဝတစ်ခုကိုပေးဆပ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေဖို့စောင့်ဆိုင်းစရာမလို။ ငွေပေးချေမှုကိုများသောအားဖြင့်၎င်းတို့လက်ရှိဘဝတွင်တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာကိုဘာမှမကြိုးစားဘဲကြိုးစားပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပုံရသူများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်မှန်ကန်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အ ဦး ထောင်များ၌ထောင်ကျနေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်သားများဖြစ်သည်။